Kunyangwe zvodii, vanhu vanoita fungidziro. Zvese kugona uye kusagadzikana zvakabikwa muhuropi hwedu nenzanga yedu. Zvinhu izvo vanhu vanofanirwa kuita… Mharadzano yeQueerness nekuremara
Kuva nemoyo murefu uye kutsunga nehurema hwangu
Chii chinotora kuti uve wechidiki ane hurema hunofambira mberi? Mhinduro ndeyebhaketi-mizhinji yemoyo murefu uye kutsunga. Zvinogona kunditorera zvakawanda… Kuva nemoyo murefu uye kutsunga nehurema hwangu